ခြတောင်ပို့မှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ရပြီး လူတွေ အမျိုးမျိုးခေါ်နေကြတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းပစ္စည်းလေးတွေ. . . - San Thitsa
ရပ်စောက်မြို့တောင်ဖက် ၇မိုင်အကွာ ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာမှာ ရှာတွေ့ထားတဲ့ ထူးထူးခြားခြား ပစ္စည်းလေးတွေပါ။ဒါလေးတွေကို ရှာတွေ့သူကတော့ Shwe Boon ဆိုတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်က ရှာတွေ့ထားပြီး မြန်မာတိုင်းရင်းဆေး group ထဲမှာ တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါလေးတွေကို ခြတောင်ပို့ထဲက တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး နာမည်အမျိုမျိုးခေါ်နေကြပါတယ်တွေ့ရှိသူကိုယ်တိုင်ကတော့ ချဆီဖူးလို့ ခေါ်ပြီး အခြားလူတွေကတော့ ခြသံ၊ ခြသည်းချေ စသည်ဖြင့် အမျိုမျိုးပြောနေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်
လူတစ်ယောက်ကလည်းချ သည်းခြေလို့ခေါ်ပေါတယ် အလုံးထိပ်က အညှာရှိတယ် ချက်တံလိုလို ကြာလို့ ဆွေးရင် နှိပ်ကြည့်ပေါက်သွား သုံးမရဘူး.. လတ်ဆတ်နေရင် နေလှန်း လုံးကျစ်လာမယ် ရေငတ်ဝမ်းသွားတာတို့ လေဖြတ်တာတို့ အသုံးပြုကြတယ် ..
ချပို့က နှစ်ကြာလို့ရှိတာပါ နှစ်အနည်းငယ်ဆိုမရှိပါ ..ချသည်းခြေက ရှားပါးပါတယ် အသုံးလိုရင် သုံးလို့ရအောင်သိမ်းထားပါ လို့ ရေးသားထားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်
နောက်တစ်ဦးကလည်းနှစ်ကြာပို့ ဂလိုင်ဆို ရှာကြည့်ပါ ချသံဆိုတာ ရှိတတ်တယ် ဇကာကွက်လို အဲ့ဒါက ရွှေဖြစ်တာ ရွှေဆို ပျော်စရာကြီးနော် ချသံက ရရင် အကော်ကြီး လို့ မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်
နောက်တစ်ယောက်ကလည်းတစ်ဗူးထဲနဲ့တင်သူဌေးဖြစ်တယ်ဆေးကုစားစုန်းကဝေ၊ပရောဂအကုန်ကောင်းတယ် ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း ဒီလို ပစ္စည်းမျိုးကို မြင်ဖူးကြလား ဘယ်လိုတွေအစွမ်းရှိလဲ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦး
ဒီချဆီဖူးလေးတွေကို တွေရှိခဲ့တဲ့ Shwe Boon ဆိုတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်က တော့ စိတ်ဝင်စားသူတွေ ဆက်သွယ်ဖို့ ဖုန်းနံပါတ် 09794075693 ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ဆိုပြီး ပြောထားပါတယ်
ခတောငျပို့မှာ ထူးထူးဆနျးဆနျးတှရေ့ပွီး လူတှေ အမြိုးမြိုးချေါနကွေတဲ့ ထူးထူးဆနျးဆနျးပစ်စညျးလေးတှေ. . .
ရပျစောကျမွို့တောငျဖကျ ၇မိုငျအကှာ ပိန်နဲကုနျးကြေးရှာမှာ ရှာတှထေ့ားတဲ့ ထူးထူးခွားခွား ပစ်စညျးလေးတှပေါ။ဒါလေးတှကေို ရှာတှသေူ့ကတော့ Shwe Boon ဆိုတဲ့ အကောငျ့ပိုငျရှငျက ရှာတှထေ့ားပွီး မွနျမာတိုငျးရငျးဆေး group ထဲမှာ တငျထားတာဖွဈပါတယျ
ဒါလေးတှကေို ခွတောငျပို့ထဲက တှရှေိ့ခဲ့တာဖွဈပွီး နာမညျအမြိုမြိုးချေါနကွေပါတယျတှရှေိ့သူကိုယျတိုငျကတော့ ခဆြီဖူးလို့ ချေါပွီး အခွားလူတှကေတော့ ခွသံ၊ ခွသညျးခြေ စသညျဖွငျ့ အမြိုမြိုးပွောနကွေတာကို တှရေ့ပါတယျ
လူတဈယောကျကလညျးခြ သညျးခွလေို့ချေါပေါတယျ အလုံးထိပျက အညှာရှိတယျ ခကျြတံလိုလို ကွာလို့ ဆှေးရငျ နှိပျကွညျ့ပေါကျသှား သုံးမရဘူး.. လတျဆတျနရေငျ နလှေနျး လုံးကဈြလာမယျ ရငေတျဝမျးသှားတာတို့ လဖွေတျတာတို့ အသုံးပွုကွတယျ ..
ခပြို့က နှဈကွာလို့ရှိတာပါ နှဈအနညျးငယျဆိုမရှိပါ ..ခသြညျးခွကေ ရှားပါးပါတယျ အသုံးလိုရငျ သုံးလို့ရအောငျသိမျးထားပါ လို့ ရေးသားထားတာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ
နောကျတဈဦးကလညျးနှဈကွာပို့ ဂလိုငျဆို ရှာကွညျ့ပါ ခသြံဆိုတာ ရှိတတျတယျ ဇကာကှကျလို အဲ့ဒါက ရှဖွေဈတာ ရှဆေို ပြျောစရာကွီးနျော ခသြံက ရရငျ အကျောကွီး လို့ မှတျခကျြပေးထားပါတယျ
နောကျတဈယောကျကလညျးတဈဗူးထဲနဲ့တငျသူဌေးဖွဈတယျဆေးကုစားစုနျးကဝေ၊ပရောဂအကုနျကောငျးတယျ ဆိုပွီး ရေးသားထားပါတယျ။ပရိတျသတျကွီးလညျး ဒီလို ပစ်စညျးမြိုးကို မွငျဖူးကွလား ဘယျလိုတှအေစှမျးရှိလဲ မှတျခကျြပေးခဲ့ပါဦး
ဒီခဆြီဖူးလေးတှကေို တှရှေိခဲ့တဲ့ Shwe Boon ဆိုတဲ့ အကောငျ့ပိုငျရှငျက တော့ စိတျဝငျစားသူတှေ ဆကျသှယျဖို့ ဖုနျးနံပါတျ 09794075693 ကို ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျပါတယျ ဆိုပွီး ပွောထားပါတယျ
← ကြက်တစ်ကောင်လုံးကို ဈေးပေါပေါရတယ်ဆိုပြီးဝယ်ခဲ့ရာ အိမ်ရောက်၍ ခုတ်ကြည့်ရာမှ ကြေကွဲသွားရသည့်အဖြစ်
၅၀၀ ကျပ်တန် ထမင်းဆိုင်၊ ရေတက်ငါးစင်ရိုင်းနဲ့ လှူတော့လှူတယ် လွဲနေတဲ့ ရွှေမြန်မာများ →
ဆုတောင်းပြည်စေ လိုတရစေ ယတြာ